Uye uyo anokunda muhondo pamusoro pekopiraiti yeJava API pane Android ndeye ... | Linux Vakapindwa muropa
Uye uyo anokunda muhondo pamusoro pekopiraiti yeJava API pane Android ndeye…
Mushure memakore mazhinji ematare akaitwa naOracle vachipesana neGoogle zvine chekuita nekopiraiti iri paJava API iyo inoshandiswa muApple, mhedzisiro yekupedzisira yazoburitswa iyo yakaisa zvinoitika zverudzi urwu rwemamiriro.
Uye icho chiyeuchidzo, Muna 2012, mutongi ane ruzivo rwehurongwa akabvumirana nechinzvimbo cheGoogle uye akabvuma kuti zita remuti rinoumba iyo API chikamu chechimiro chemirairo - chimiro chakamisikidzwa chakabatana nechero basa. Iyi seti yemirairo inorapwa nemutemo wekopimendi sekusingaitwe nekopiraiti, nekuti kudzokorora kwechimiro chemirairo mamiriro ekuenderana uye kutakurika.
Naizvozvo, kuzivikanwa kwemitsara ine nzira yemusoro tsananguro uye kuzivisa hazvina basa: kuita zvakafanana mashandiro, mazita emabasa anoumba iyo API anofanirwa kufanana, kunyangwe kana iko kuita kwacho kuchiitwa zvakasiyana. Sezvo paine nzira imwe chete yekuratidza zano kana basa, munhu wese akasununguka kushandisa zvakafanana zvirevo uye hapana anogona kutonga akadaro matauriro.
Oracle yakakwidza chikumbiro uye yakaita kuti US Federal Court of Appeals ibvise dare rekukwirira rakatonga kuti Java API inzvimbo yeangwaru yeOracle. Kubva ipapo, Google yachinja maitiro uye yakaedza kuratidza kuti kuiswa kweJava API papuratifomu yeApple kushandiswa kwakanaka uye kuyedza uku kwakashongedzwa korona yekubudirira.
Chinzvimbo cheGoogle ndechekuti kuvaka software inotakurika kwaisada rezinesi reAPI uye kudzokorora API kugadzira zvinowirirana zvinoshanda vamwe yaive "kushandiswa kwakanaka." Sekureva kweGoogle, kupatsanurwa kwemaAPI senzvimbo yehungwaru kuchakanganisa indasitiri iyisezvo ichikanganisa kuvandudzwa kwezvinhu zvitsva, uye kugadzirwa kweanowirirana anoshanda emanyorerwo eapuratifomu mapuratifomu anogona kuve musoro wezvemitemo.
Oracle akaisa chikumbiro chechipiri uye zvakare nyaya yacho yakaongororwazve mukuda kwayo. Dare rakatonga kuti 'kushandiswa kwakaringana' chirevo hachishande kuApple, sezvo chikuva ichi chinogadzirwa neGoogle nekuda kwekuzvida, chichiitwa kwete kuburikidza nekutengesa chaiko kwechigadzirwa che software, asi kuburikidza nekutonga pamusoro peshumiro dzinoenderana nekushambadzira.
Panguva imwecheteyo, Google inoramba ichitonga pamusoro pevashandisi kuburikidza neAPI yekudyidzana kuti isangane nemasevhisi ayo, kushandiswa kwayo kunorambidzwa kugadzira zvinoshanda zvakafanana, kureva kuti, kushandiswa kweJava API hakugumiri kune isiri-yekutengesa. Mukupindura, Google yakanyorera chikumbiro kudare repamusoro uye Dare Repamusorosoro reUS rakaongorora zvakare nyaya yeIPR ndokutonga vachitsigira Google.
Saka zvino, Dare Repamusorosoro reUnited States rakatonga nyaya yeOracle vs. Google kuenderera kubvira 2010 pakushandisa iyo Java API pane Android chikuva. Dare repamusoro rakatsigira Google uye akatonga kuti iyo Java API yaishandiswa zvakanaka.
Dare rakabvumirana kuti chinangwa cheGoogle chaive chekugadzira imwe sisitimu yakanangana nekugadzirisa matambudziko enzvimbo dzakasiyana dzemakomputa uye kuvandudzwa kwepuratifomu yeApple kwakabatsira kuona nekukurudzira ichi chinangwa. Nhoroondo inoratidza kuti pane nzira dzinoverengeka dzekuti kuitwazve kweiyo interface kunogona kusimudzira kuvandudzwa kwemapurogiramu emakomputa. Chinangwa cheGoogle chave chiri chekuzadzisa urwu rudzi rwekufambira mberi kwekugadzira, inova iyo huru yekutarisisa mutemo wekodzero.
Google yakwereta angangoita gumi nemazana gumi nemazana emitsetse yeAPI mamiriro etsananguro, inova chete 0,4% yeiyo 2.86 mamirioni mutsara API kuitiswa. Tichifunga nezve saizi uye kukosha kwechikamu chakashandiswa chekodhi, dare rakaona mitsara gumi nemazana nemazana mashanu sechikamu chidiki chechikamu chikuru kwazvo.
Sechikamu cheiyo programming interface, tambo dzakateedzerwa dzakabatana zvisingaite neimwe (isiri-Oracle) kodhi inoshandiswa nevagadziri. Google yakateedzera iyo snippet yekodhi iri mubvunzo kwete nekuda kwayo kukwana kana mashandiro ebasa, asi nekuti yaibvumidza programmers kushandisa huripo hunyanzvi munzvimbo nyowani yekomputa yemafoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Uye uyo anokunda muhondo pamusoro pekopiraiti yeJava API pane Android ndeye…